Haddii Lionel Messi & Cristian Ronaldo Laga Reebo, Xidigahee Aduunka Ugu Fiicnaan Lahaa Min 2010kii Ilaa 2018? Qoraa Kubbada Cagta Ah Oo Liiska Gaar Ah Magacaabay. - Gool24.Net
Haddii Lionel Messi & Cristian Ronaldo Laga Reebo, Xidigahee Aduunka Ugu Fiicnaan Lahaa Min 2010kii Ilaa 2018? Qoraa Kubbada Cagta Ah Oo Liiska Gaar Ah Magacaabay.
Sanadkan 2018 waxa uu noqon doonaa sanadkii ugu horeeyay ee abaal marintan Ballon d’Or uu ku guulaysan doono ciyaartoy aan ahayn Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo tan iyo sanadkii 2007 kii markaas oo uu Kaka ahaa ciyaartoygii ugu danbeeyay ee aan Ronaldo iyo Messi ahayn ee abaal marintan ku soo guulaystay.
Sida ay saadaashu sheegayso Mbappe, Varane iyo Modric midkood ayaa loo caleemo saari doonaa abaal marintan Ballon d’Or 2018 haddii ayna wax ka duwani ka soo bixin France Football laakiin qoraa kubbada cagta ah ayaa bixiyay xogta ciyaartoyda Ballon d’Or ku soo guulaysan kari lahaa min 2010 ilaa 2018 haddii aan lagu xisaabtamin Messi iyo Ronaldo oo loo arko in ay cidwalba ka sareeyaan.
Qoraaga kubbada cagta ee Greg Johnson ayaa abuuray dood ah xidigaha sanad kastaba aduunka ugu soo fiicnaan lahaa min 2010 ilaa 2018 isaga ayaana iska bilaabay in uu magacaabo liiska ciyaartoydan taas oo laga fahmay xidiga uu u arko in uu hadda aduunka ugu fiican yahay marka aan Messi iyo Ronaldo dooda lagu soo darin.
Greg Johnson ayaa bartiisa twitterka ku soo qorray: “Adiga ahaan, kuwee ahaa ciyaartoyda ugu fiicnaa sanad kastaba min 2010 kii ee ayna ku jirin Messi iyoo Ronaldo?. Kadib waxa uu ka hadlay fikradiisa dooda uu abuuray wuxuuna yidhi: “Anigu waxaan ku tagayaa: ” 2010 – Sneijder, 2011 – Xavi, 2012 – Xavi , 2013 – Ribery, 2014 – Robben , 2015 – Neymar , 2016 – Griezmann , 2017 – De Bruyne , 2018 – Mbappe”.
Dooda uu abuuray Greg Johnson waxaa laga fahmay in sanadkan 2018 uu aaminsan yahay in Klyian Mbappe uu yahay xidiga ugu fiican kubbada cagta aduunka marka laga reebo Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo isla markaana uu u qalmo ku guulaysiga Ballon d’Or.
France Football ayaa December 3,2018 si rasmi ah u shaacin doonta kaalmah la kala galay iyo waliba xidiga ku guulaysan doona abaal marinta Ballon d’Or laakiin waxay u muuqataa in abaal marintan ayna markii lixaad ku guulaysan doonin labada xidig ee sida dhabta ah aduunka ugu fiican ee Messi iyo Ronaldo.
Haddaba akhriste, haddii aad qayb ka noqoto dooda uu abuuray qoraaga kubbada cagta ee Greg Johnson, miyaad magacaabi kartaa sanad kasta xidigii kubbada cagta aduunka ugu fiicnaan lahaa haddii Messi iyo Ronaldo si gaar ah looga saaro?